Wave Solding - शेन्ज़ेन Fumax टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
फ्यूमेक्सले छाला कम्पोनेन्ट सोल्डर गर्न वेभ सोल्डरिंग मेशिन प्रयोग गर्दछ। योसँग हात मिलाप गर्ने भन्दा राम्रो गुण हो। यो पनि छिटो छ।
वेभ सोल्डरिंग पाराको सहयोगमा सोल्डर स्नानको तरल सतहमा पग्लेको तरल टांकाको साथ विशेष आकारको सोल्डर छाल बनाउँदैछ। त्यसपछि कन्भेयर कुर्सीमा सम्मिलित कम्पोनेन्टहरू सहित पीसीबी राख्दै, र सोल्डर जोर्नीहरू महसुस गर्न विशेष कोण र गहिराईमा सोल्डर वेभबाट पार गर्दै।
१ किन तरंग सोल्डरिंग छनौट गर्नुहोस्?
जसरी कम्पोनेन्टहरू सानो र पीसीबी डिन्सर हुँदै जान्छ, सोल्डर जोड्ने बिचहरू र पुलहरू छोटो सर्किटको सम्भावना बढेको छ। वेभ सोल्डरिंगले यस समस्यालाई ठूलो मात्रामा समाधान गर्दछ। यस बाहेक यसका अन्य फाइदाहरू पनि छन्:
(१) बग्ने अवस्थाको सोल्डरले पीसीबी सतहलाई सोल्डरको साथ पूर्ण रूपमा सोल्डर गर्दछ र थर्मल चालकताको राम्रो समारोह ल्याउँछ।
(२) सोल्डर र पीसीबीको बीचमा सम्पर्क गर्ने समय घटाउँदै छ।
()) पीसीबी यातायातको लागि प्रसारण प्रणाली मात्र रैखिक गतिको साथ बनाउनको लागि सरल छ।
()) बोर्डले चाँडै नै उच्च तापमानमा सोल्डरको साथ सम्पर्क गर्दछ, जसले बोर्डको वार्पिंग कम गर्न सक्दछ।
()) पग्लिएको सोल्डरको सतहमा हावालाई अलग गर्न एक एन्टी-ऑक्सीडन्ट छ। जबसम्म हावामा सोल्डर वा wave्ग पर्दाफास हुन्छ, अक्सिडेसन समय घटाइन्छ, र अक्साइड स्ल्यागले गर्दा सोल्डर फोहोर कम हुन्छ।
()) मिलाप जोड्ने र औसत मिलाप रचनाको उच्च गुणस्तर।
सर्किट बोर्डमा प्लग-इनहरू आवश्यक भएको बेला वेभ सोल्डरि Using्ग प्रयोग गर्दै
Prod. उत्पादन तयारी
सोल्डर पेस्ट रिकभरी
सोल्डर टाँस्न स्ट्रिringिंग
।। हाम्रो क्षमता: Se सेटहरू
ब्रान्ड UN SUNEAST
।। तरंग सोल्डरिंग र रिफ्लो सोल्डरिंग बीच भिन्नता:
(१) रिफ्लो सोल्डरिंग मुख्यतया चिप घटकहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ; वेभ सोल्डरिंग मुख्यतया सोल्डरिंग प्लग-इनहरूको लागि हो।
(२) रिफ्लो सोल्डरिंगको भट्टीको अगाडि पहिले नै सोल्डर छ र सोल्डरको पेस्ट मात्र भट्टीमा पग्लिन्छ र एक मिलाप संयुक्त बनाउँदछ; वेभ सोल्डरिंग भट्टीको अगाडि सोल्डर बिना नै गरिन्छ, र भट्टीमा सोल्डर गरिएको छ।
()) रिफ्लो सोल्डरिंग: उच्च तापमान वायु रूपहरू कम्पोनेन्टहरूमा रिफ्लो सोल्डरिंग; वेभ सोल्डरिंग: पिघलाएको सोल्डरले कम्पोनेन्ट्सलाई वेभ सोल्डरिंगको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।